तिम्रो कट्टु खोई ?
इटहरी । म सानो छदा मैले अङग्रेजीको एउटा कथा पढेको थिए । त्यसमा एउटा इप्रायर भन्ने राजा थियो । उसलाई प्रत्येक दिन नयाँ लुगा चाहिने । उसलाई लुगा सिलाउने कालिगढ पनि नयाँ डिजाइनको लुगा सिलाउदा सिलाउदै अब डिजाइन पनि सकिएपछि इम्पायरलाई कालिगढले एकदम नयाँ लुगा सिलाई दिने भन्यो । उसले त्यसको लागि कालिगढले हावामा कैची चलायो । हावामै सियो र हावामै आईरन पनि ग¥यो र राजालाई नयाँ लुगा लगाई दियो । अब राजा नयाँ लुगा लगाएर आफ्ना प्रजालाई हेर्न आउनेृ उर्दि ग¥र्यो । त्यो दिन पनि राजाको नयाँ लुगा हेर्न आए । इम्पायर घोडामा चढेर सहर वरिपरि घुम्दै थियो । नागरिकले ... थिए । राजा घोडामा हात हल्लाउदै हिड्दै थियो । नयाँ लुगामा सजिएको छु भनेर दंग थियो । जनताको बिचमा उभिएको एउटा बच्चाले भन्यो । राजा त ना«ङ्गै छन् ।
त्यो सुनेपछि त्यहाँ भएका जनताले आँखा चिम्लिएर मुख छोपेर अर्कातिर फर्किए राजा नाङ्गै हिडेकोमा लाज घिन केहि थिएन् । नयाँ लुगा लाएर हिडेको भन्ने थियो ।
अहिले नेकपाका नेताहरु त्यही इम्पायरको नयाँ लुगा जस्तै हातमा कट्टु बोकेर हिडिरहेका छन् । लाज घिन केहि छैन् । अब तपाईको प्रश्न हुन सक्छ । कहाँ त्यसरी हिडेका छन् त्यस्तै लाज पनि नढाकी उनीहरु त सुट लगाएर त्यहाँ माथी टाई पनि कसेर चिल्ला चिल्ला राम्रो करोड करोड पर्ने गाडिमा पो छन् त । बरु जनता नाङ्गा छन् । फाटेको कट्टु सिलाएर लगाएर हिडेका छन् भन्नुहोला तर तपाई हामीले त्यो चाहि बाहिरी कुरा भयो । भित्र हेर्नुहोस ति सुट लगाएर चिल्ला अरबौको गाडिमा हिड्नेहरु यतिबेला कसरी कट्टु हातमा बोकेर एउटाले अर्कालाई नङ्गयाउदै छन् र आफ्नो कट्टु आफै खोलेर कुद्दै छन् । हिजो जनताका लागि म गर्छु भनेर आएका थिए । तिनीहरुले आफ्ना आफ्ना लागि अलिसान महल जोडे । कार जोडे अरबौ रुपिया विदेशका बैकमा राख्न भ्याए । छोरा छोरी अमेरीका बेलायत क्यानाडा पु¥याउन भ्याए ।
जनताका नाममा लुट्न लुटे । जनताका छोरा छोरीलाई जुलुसमा कुदाए, लाठि खुवाए । तर नेताका छोराछोरी चाही विदेश पठाए । लाठि खाने बेलामा, मर्ने बेलामा, मारिने बेलामा, तिनै टालेको कट्टु लाउनेका छोराछोरी परे । मेयर हुने बेलामा, मन्त्री हुने बेलामा, नियुक्ति पाउने र बढुवा हुनेबेलामा तिनै आलिसान महलमा बस्ने, सुुट लगाएर कारमा हिड्ने, जनताको मुक्तिको झुटा कुरा गर्नेहरुका छोराछोरी बुहारीहरुले मात्रै पाउने ? यति मात्र होइन नेताहरु थकाई मार्न रिसोर्ट जान्छन् । लाखौ खर्च गरेर विदेश घुम्न जान्छन् । जनताको कुरा गर्छन् । ति जनता जसको घर छैन, जसको जमिन छैन, जोे दाउरा बेचेर जीवन चलाएका छन्, गिटी कुटेर जीवन चलाएका छन्, तिनीहरुका लागि अनि अधिकार नपाएका लागि अधिकार दिलाउने, न्याय नपाएका लागि न्याय दिने भनेर लागेका थिए । त्यसैले जनताले कम्युनिष्ट पार्टिलाई रुचाएका हुन् ।
कम्युनिष्ट नकि कम्युनिष्ट पाटिका नेताहरु सम्पत्तीले भरिपुर्ण भएपछि तीनै इम्पायर राजाको जस्तै स्वाङ पारेर हातमा आफ्नो कट्टु खोलेर दगुर्न थाले । तपाईहरुलाई लाग्ला यो के भन्न लागेको भनेर । यो मैले यतिबेला नेकपाका नेताहरुले कट्टु मात्रै होइन भित्रको चार इन्चको लगौटी पनि फुकालेर दगुरी रहनेलाई भनेको हुँ । यो धेरै भन्नै पर्दैन् । अहिलेका केहि दृश्यहरुलाई राम्रो गरि विचार गर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ ।
कम्युनिष्ट पाटी भनेको कार्यक्रम मात्रै होइन । त्यसका कार्यकर्ताको अनुसासनले चल्नुपर्छ । पद्धति र नीति सिद्धान्तले चल्नुपर्छ । तर कम्युनिष्ट पार्टी त्यसरी चलेन । म लामो समयदेखि कम्युनिष्ट पार्टिलाई त्यहि बाहिर बसेर हेर्दै छु । मैले पनि केहि बुझ्दै छु । तर त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टिलाई मनपरी चलाएका छन् । त्यो जसरी चलाए पनि नेता तिनीहरु नै हुन भनेर कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनताले भनिरहे । सोही कारण नेताहरुलाई अहिले सरकारको कार्यक्रमलाई ठिकै हिसाबले लैजान अहिले अप्ठ्यारो भयो । कार्यकर्ताले भोली सजिलो होला भन्दै पर्खिएर बसे । करिब २० औँ बर्षदेखि पर्खिएका कार्यकर्ता पछिल्लो समयदेखि माथीकाहरुले जे सुकै गरेपनि तल हाम्रो ठाँउ हामीले बनाउने हो भनेर माथीसंग मतलब पनि नराखी काम गर्यौ । तर अब त हदै भयो । यति हद भयो, अब त आँखा चिम्लिएर अर्का पट्टी फर्किदा पनि नहुने भयो ।
अब तिनीहरुका अन्तरवार्ताबाट सुरु गरौँ कि चिठी र प्रतिवेदनबाट भन्ने लाग्यो । पहिलो तिनका अन्तरवार्ताबाट सुरु गरौँ । एउटा नेतालाई पत्रकारले सोध्छन्ः तपाईहरुले निर्वाचनमा हारेका नेताहरुलाई फेरी संसदमा लैजादा जनताको अपमान भएन ? जनताबाट हारेको मानिस ५ वर्षसम्म जनताको काम गर्दै बस्नुपर्ने होइन ? भन्दा ति नेता भन्छन्ः अरु तिर पनि चलन छ भन्छन् ।
अन्तरघात गरेर हराइयो भन्छन् । कस्तो गजब कति सारै नाङ्गै भएर कुरा गरेको । अन्तरघात गरियो रे तर जनताले मन नपराएको चाही हो । त्यसो भए हारेका जति सबैलाई अन्तरघात गरेको हो त ? जनताले किन भोट हालेनन भनेर खोजेर आफ्ना कमि हटाउने सच्याउनु त होइन् अन्तरघात गरे भन्यो अर्कालाई दोष थोपर्यो । यी मानिसहरु एकै छिन पनि कुर्सि बाहिर बस्नु नहुने । सरकारमा पुगी हाल्नुपर्ने । त्यहाँ पुगेर सरकारी ढिकुटी लुटि हाल्नुपर्ने । ए तिनले जनताको लागि कहिले के गरे अनि तिनै नेता भन्छन् । जनतालले मन नपरेको मानिसलाई भोट दिन्न भन्न पाउदैनन् । त्यस्तालाई कार्वाहि गर्नुपर्छ । ओहो नेता महासय तिमीहरुले जानेको त्यति हो । तिमीहरु कस्ले कस्ले के(के गरेका छौ । जनता संग एक एकको हिसाब किताब छ । अर्का नेता पनि अन्तरवार्तामा ८ लाख कार्यकर्ताले बनाएका पार्टी भन्दै थिए ।
अनि उनी यो पार्टी फुटे पनि सानो चोइटो जान्छ भन्थे । ओहो कस्तो नाङ्गो कुरा सानो टुव्रmा जाँदा के हुन्छ । अनि यतिका विधि कार्यकर्ता तिम्रो अनुहार हेरेर आएका हुन् ? याद रहोस् उनीहरु यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागेका हुन् । यो मुलुकका तलका कार्यकर्तालाई तिमीहरुले यति अपमान गरेउ । तिनको कुनै मतलब राखेनौ हुदा हुदा उनीहरुका स्वार्थलाई बिर्सेर देश विकास हुन्छ भन्नेठुलो सपना देखेका थिए । अब मुलुक समृद्धिको बाटोमा जाला भनेर तर तिमीहरुले तुहाई दियौ ।
अब चिठ्ठीका कुरा । तिमीहरु एक अर्काले लेखेका चिठ्ठी त्यो कस्लाई देखाएको तमासा हो । पहिलो कुरा देशको ढिकुटी बाट राष्ट्रले सुरक्षा कर्मि गाडि सबै सुविधा सबैलाई दिएको छ । अनि केहि कुरा भए बसेर कुरा गरेर षडयन्त्रकारी भए नभएको छलफल गरेर त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने होइन् । त्यो कम्युनिष्ट तरिका होइन् । चिठ्ठीनै लेख्दा पनि नाङ्गै हुने गरि लेख्नुपर्छ । एकातिरबाट लेखेपनि त्यसलाई बसेर छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा एउटाले लेखेपछि अर्काले लेखि हाल्नुपर्ने । त्यो तमासा कसलाई देखाएको यस्तो हुँदा पनि तिमीहरुलाई जनताले किन नेता मानि रहनुपर्ने यो भयो चिठ्ठीका कुरा ।
अब म अलिकति प्रतिवेदन तिर जान्छु । प्रतिवेदन भनेको के हो ? त्यो एउटाले अर्कोको कुट्टु खोलीदिने अर्कोले अर्कोको । अब एउटाले खोलेपछि अर्कोले पनि खोल्ने होला यो तमासा कसैलाई लान्छना लाउनलाई प्रतिवेदन भनेको यस्तो त्यसलाई प्रतिवेदन भनिएको छ । त्यो हेरे पछि ओहो झनै नाङ्गै छन् । त्यो प्रतिवेदन नै होइन् । खोई त्यो केहो ? त्यो हेर्दा सबै हैसियत देख्यौँ । यहाँ बोलेका धेरै कुरामा त म जान चाहन्न । पहिलो त्यो कुरा अगाडि राखौँ । पार्टीको प्रतिवेदनमा पहिले अन्तराष्ट्रिय परिस्थीतिका बारेमा लेखिएको हुन्छ । त्यो लैख्न मन लागेन् ।
तर यो ठुलो कम्युनिष्ट पाटीको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिस्थीति देशको शक्ति सन्तुलनको अवस्था अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसपछि पाटीको साङ्गठनिक अवस्था सरकारले के गर्दैछ । अब के गर्नुपर्छ । आगामी कामको योजना हुन्छ । अन्तिममा आवश्यक भए आलोचना बिषय राखेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एउटा आरोप पत्र त्यो कस्तो नाङ्गो छ । त्यसमा भएका कुरा यदि साच्चिनै हो भने अहिलेसम्म के हेरेर बसेको अर्को त्यो पनि कहि प्रतिवेदन हो । त्यसले त्यो पंतिलाई असक्षमता अकर्मण्यता र दुरासच देखिन्छ । त्यहाँ धेरै कुरा छन् । कसले आफ्नो बेलामा तिनीहरुले देखाएको आलोचना सबैलाई थाहा छ । नेपाली जनताले तिमीहरुका आचरण नदेखेको हैन् । कम्युनिष्ट पार्टीको नेता हु भन्नेले भन्नु नभन्नु छरपष्ट पारेर सडकमा पोखेको कार्यकर्ताले टुलुटुलु हेरेर ताली पिटी दिनुपर्ने थुक्क तिमीहरुको आचरण त्यहि हो । तिमीहरु कति नालायक छौ भन्ने यसले प्रष्ट देखाएको छ । अब के आशा गर्नु जनताले । तिमीहरुको त्यो प्रतिवेदन जसले जसलाई भनेको भएपनि त्यो नाङ्गो तमासा हो । त्यहाँ भएका कुरा हुन कि होइनन भन्नेमा मेरो बहस हैन् । त्यहाँ भएका केहि कुरालाई मैले भन्नेपर्छ ।
त्यसमा कोभिडका बारेमा सरकारले गरेन भन्ने रहेछ । त्यसमा पनि मैले एउटा कोभिड १९ सम्बन्धी लेखमा भनेको थिए । अझै म पनि कोभिड संव्रmमित भएकोले मैले अब नेकपाले जिल्ला जिल्लामा जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन गरि लकडाउनको बेला जोखिममा परेका मजदुरलाई के गर्न सकिन्छ । पार्टी कमिटीहरुलाई निर्देशन गरि प्रत्येक टोलमा टोल सहयोग समिति बनाएर नियन्त्रणका विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको थिए । त्यो काम पार्टीले राम्ररी गर्न सक्ने थियो त्यो चाहि नगर्ने खाली एकहोरो सरकारलाई गाली ग¥र्यो आफु ताली पिटेर बस्यो । अनि हाम्रा ८ लाख कार्यकर्ता छन् भन्यो बस्यो । ति आठ लाख कार्यकर्ता चाहि परिचालन नगर्ने आफु कसरी कुर्सिमा पुग्न सकिन्छ त्यो खेलमा मच्चिएर लाग्ने अनि अब कोभिड नियन्त्रण गर्ने काम गरेको भए कसले रोक्थ्यो । कुन कार्यकर्ताले गर्दिन भन्थ्यो । यस्ता जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय चाहि नगर्न अनि कसरी कुर्सि प्राप्त गर्ने भनेर लाग्ने । खाली अरुलाई गाली गर्ने यी भन्दा नामर्द कुरा के हुन्छ ।
अब अलिकति भ्रष्टचारका बारेमा पनि त्यहि भनिएको छ । त्यहाँ भएको कुरा बारे मेरो यो वा त्यो छोराको कुरा गर्दिन् । सबै विषय छानविनका दायरामा लैजान नै परिणाम आउला कार्वाहि गर्नेछन् । त्यहाँ मैले हेर्दै गएको ललिता निवासका बारेमा देखिन ललिता निवास प्रकरण तस्करी गर्ने तस्करहरु मध्येका धेरैलाई मुद्धा लाग्यो । कसैको संसद पद निलम्बन भयो । तर मुख्य मानिस चाहि डका पिटेर हिडिरहेको छ । तल तल कार्वाहि भोग्ने पर्ने हो त्यो चाहि राख्न विर्षेछन् । अर्को सुन तस्करको मुख्य मान्छे न समाते भनेर पनि लेख्नुपर्दैन् थियो । त्यो किन नलेखेको अर्को हाइड्रो पावर भएको भ्रूष्टचार खोई कता गयो । अनि खाने पानिमा भएको भ्रष्टचार पनि विर्सिएछन् । होइन् । यो लेख्न मिलेन कि ? यसरी आरोप पत्र मैदानमा पु¥याउने काम गरेको छ । अब अर्को पनि आरोप पत्र आउला त्यसले अरुको लगौट पनि खोली पछि बाकिँ के रहयो । अब त यस्तो नाङ्गो यस्तो पनि हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा अब पनि यिनै नेताहरु मानेर हिड्ने अझै पनि ठाँउ बाँकी कहि छ । यस्तो कट्टु खोला खोलले तिमीहरु आफु विचमा मात्रै कट्टु खोलेको होइन त्यो त आम जनता भए ठाँउमा पनि पारदर्शी छ । इम्पायरले नयाँ लुगा लगाएर हिडे जस्तै ।
अब त धोती खोलेर हिडिसके उनि अब कसरी जनता अगाडि मुख देखाउछौ । छि छि छि ।
अब दोस्रो दर्जाका नेताहरु अब पार्टीलाई जोगाई राख्ने हो भने पार्टी निरन्तरतालाई जोगाई राख्ने हो भने दोस्रो पुस्ता नेताहरु तिमीहरुले अब ठाडो हस्तछेप गरेर पार्टी आफुले कब्जा गरेर, त्यसलाई चलाउने हो भने अब पनि समय छ । जनताले पर्खिएर हेरेका छन् । अब गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने भनेकै दोस्रो पुस्ताले हो । अर्को अहिले जो ९ जनाले आफ्नो कट्टु लगौटो खोलेका छन् यो ९ जनाको मात्र पार्टी होइन् । ९ जनामा विवाद भयो भने त्यो विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउने उनीहरुलाई हटाएर दोस्रो र तेस्रो वर्गियता, नेताहरुले पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । यहाँ सचिवालय भन्ने स्थाई कमिटी भन्ने । अनि बरिष्ट नेता भन्ने अब विद्यानबाट हटाएर विधानमा पहिलो केन्द्रिय कमिटी त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव बनाएर जानुपर्छ । यहाँ त मन लाग्दो पद सृर्जना गरेको छ त भन्दा म ठुलो भनेको छ । एउटाले अर्काको उछितो काढेको अनि कसरी चल्छ पार्टी अहिले तिनका कुरा सुन्नु यस्तो उदण्ड किसिम र प्रत्तुुत हुन्छ । यस्ताबाट संगठन चल्दैन अब त दिमागले पनि काम गर्दैन तै पनि म हुँ सबै थोक भनेको छ म विना यो संसार चल्दैन जतिकै गरेर । चल्छ यिनीहरु विना पनि राम्रो गरि चल्छ आट गर तिमीहरुले दोस्रँे पुस्ताले पनि आट गर्न सकेन नामर्द भ एभने तेस्रोले तयार हुनुपर्छ । देशलाई वर्वाद हुनत दिनुहुदैन् ।
अब दोस्रो दर्जाका नेताहरु भनेकाहरु पनि लामो समयदेखि काम गरेका अहिले यिनीहरुलाई मिलाउन भनेर लागेका छन् । उनीहरुलाई यो पार्टीलाई जोगाउनु छ । उनीहरुनै दोस्रो पुस्ताका भनिएको सचिवालयमा भएर मात्रै हो । तर अब सचिवालयमा भएकाहरु काम नलाग्ने भए पनि दोस्रोले जबरजस्ती नेतृत्व लिनुपर्छ । अहिले महासचिवले भनेको जस्तो सबैले राजीनामा दिने हो भने स्वीकृत कस्ले गर्ने । अनि आज भोलीनै महाधिवेशन हुने अवस्तामा न भएको बेलामा केन्द्रिय कमिटी कस्ले बनाउछ । त्यसैले अब सचिवालयलाई विघटन नगरेर मात्रै केन्द्रिय कमिटी र त्यो काम चलाउनका लागि अध्यक्ष महासचिव र सानु छरितो स्थाई कमिटी बनाउनुपर्छ । अहिले नाङ्गो बनाउनेहरु भनेका बरिष्टहरु हुन् । बरिष्टहरुलाई पद चाहिने अब अब सबै ठाँउबाट हटाएपछि मात्रै ठिक ठाँउमा आउछन् । अब यी नाङ्गा भुतुङ्गा पाटी चल्दैन ।
अन्तिममा अहिले पार्टीमा एउटाले अर्कोको पुच्छर समाएर बसेका छन् । दोस्रो पुस्ताका र तेस्रो पुस्ताका भनिएकाहरु पनि एक एक जनाको फेर नसमाई बैतणी तरिदैन जतिकै गरेका छन् । फेर समाउनेहरु अब बैतणी तर्ने हैन डुबेर मर्छन् । तिमीहरु सक्षम छौ । लायक छौ । तिमीहरुले कसैको फेर समाई रहनै पर्दैन् र यतिको लामो अनुभवले सबैकाम सिकाउछ । फेर समाउनेहरु ल्वाठ हुन् । स्थाई कमिटीमा पुगेकाहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु आफ्नै ज्ञान प्रयोग ग¥र्यो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ । यसो गरे कम्तिमा सम्पुर्ण कार्यकर्ता लाग्नेछन् । त्यसो भए पार्टी जोगीन सक्छ । अबको बाटो भनेको यो मात्रै हो । अब सोच्ने भन्दा पनि कार्यन्वयनको पाटोलाई समाउन सक्नुपर्छ । यो पार्टी हिजो पनि कार्यकर्ताले थामेको पार्टी हो । यति बेला कार्यकर्ताको मन नराम्रो गरि भाचिएको छ । त्यो भाचिएको मन फेरी त्यहि नाङ्गाहरुको अनुहार देखा परे भने केहि फेर समाउनेहरु लाग्लान तर स्वाभीमानीहरु । लाग्ने छैनन् । समयले अब कसैलाई परिवर्तन समयलाई समाएर अगाडि बाध्नुपर्छ ।